Waxaan ka Fantom External Hard Drive soo kaban karto, Files?
Hab-Fantom External Hard Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Waan ka furay aan Fantom drive dibadda adag on aan computer, oo waxaan ogaadey in dhammaan filimada mid ka mid ah fayl ka baxeen. Aad ayaan ugu hubiyo in aan aan la tirtiro wax kasta oo iyaga ka mid ah. Tani waa si cajiib ah. Waxaa la ii sheegay in videos weli waa aan drive Fantom adag oo waxaan iyaga u soo ceshano karo nooc ka mid ah danabka. Ma run ah? Haddii ay sidaas tahay, sidee baan u samayn karaa in?
Dhab ahaantii, faylasha lumay kaliya calaamadeeyay xogta sida geli karin on your Fantom drive dibadda adag sida ugu dhakhsaha badan ay lumaan. Waxaad weli dib u soo ceshano karaa lumay videos ka Fantom drive dibadda adag, xaaladda in ay tahay in aan la overwritten by xog cusub oo ku saabsan baabuur. Taas macnaheedu waa marka aad qaado tallaabo degdeg ah oo sax ah, waxaana suurto gal ah in aad soo kaban karto, xogta laga Fantom drive dibadda adag.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij Fantom dibadda adag xogta drive kabashada taas oo ka caawisa in aad ka bogsato lumay, tirtiray, formatted iyo faylasha laga aad Fantom drive adag dibadda fudayd. Its user-friendly interface iyo qaababka sahlan laakiin xoog awood u in aad ka bogsato noocyada file oo dhan ka Fantom drive adag dibadeed, oo ay ku jiraan images, videos, files audio, document files iyo in ka badan.
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah si loo soo celiyo xogta ka Fantom drive dibadda adag hadda.
Tilmaan-bixiyahan waxa ku shaqeeya la Windows version of Wondershare Data Recovery. Users Mac samayn kartaa dib u soo kabashada iyadoo talaabooyinka la mid ah sidoo kale.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ku soo bilowdo Fantom kabashada xogta drive adag dibadda
Waxaad arki doonaa interface ah 3 hababka soo kabashada iyo "furmaya Recovery" doorasho ka dib markii socda barnaamijka on your computer.
Si aad u soo kabsado lumay, la tirtiro ama formatted files ka Fantom drive dibadda u adag, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 baarista Fantom drive dibadda adag tahay in la raadiyo xog laga badiyay waxaa ku
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad Fantom drive dibadda adag oo guji "bilow" button furmo si ha barnaamijka waxa laga baarayo.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonaysid in aad ka soo kabsado xogta ka formatted Fantom drive ah dibadda u adag, waxaad dooran kartaa "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka Fantom drive dibadda adag
Ka dib markii iskaanka, helay files aad Fantom drive dibadda adag ayaa la soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ka arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan ee aad files lumay la raadsan karo.
Hadda waxaad karaan faylasha aad doonaysid in aad dib u hanato oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on xijaab your computer ee.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii kuwa files si aad Fantom drive dibadda adag inta ay socoto dib u soo kabashada.
> Resource > Ladnaansho > Siduu u Fantom External Hard Drive Data Recovery